Midowga Musharaxiinta oo Golaha Shacabka uga digay inay qaadaan tallaabo khaldan | Dhacdo
Home Wararka Maanta Midowga Musharaxiinta oo Golaha Shacabka uga digay inay qaadaan tallaabo khaldan
Midowga Musharaxiinta oo Golaha Shacabka uga digay inay qaadaan tallaabo khaldan
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa uga digay Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah xasilloonida iyo geeddi-socodka doorashooyinka dalka, sidii dhacday 12-kii April oo laba sano ay ugu kordhiyeen Hay’adaha Dowladda Federaalka.
Warsaxaafadeed ay soo saareen Midowga Musharaxiinta ayay ku sheegeen in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan in heshiis laga gaaro doorashooyinka dalka, sidaasi darteedna ay ugu baaqayaan inuu faraha kala baxo arrimaha doorashooyinka ee dalka, isla-markaana uu xafiiska baneeyo.
Sidoo kale waxay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ugu baaqeen in uu si buuxdo ula wareego hoggaanka doorashooyinka iyo amniga dalka, tani oo ay sheegeen inay sahlayso dib u midaynta iyo kalsooni dhiska Ciidamada Qalabka Sida, ee ku kala qaybsamay muddo kordhinta.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa Madaxda Dowlad Goboleedyada ugu baaqay in ay xukuumadda ku garab siiyaan hoggaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka, si dalka looga samata-bixiyo qalalaase amni iyo in doorashada la boobo.
Previous articleCiidanka Xoogga Dalka oo hawlgalo ka fuliyay Shabellaha Hoose (SAWIRRO)
Next articleMadaxweynaha oo maanta hortagaya Xildhibaanada Golaha Shacabka